विवाहअघि ‘नो सेक्स’ — Paschimnews.com News From Nepal
विवाहअघि ‘नो सेक्स’
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/३/२८ गते
काठमाडौं । मोडलिङ क्षेत्रमा स्थापित हुने धुनमा लागेकी प्रतिशा रिजाल २०५५ सालमा मोरङको विराटचोकमा जन्मिएकी हुन् । यी सुन्दरी हाल बस्एड अध्ययनरत छिन् । प्रतिशासँगको कुराकानी आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । कुराकानीको केही अंशः
यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो ?
डाक्टर, नर्स, पाइलट र एयर होस्टेज बनेको भए मलाई चिन्ने सीमित मानिस हुन्थे । यो पेसामा लाग्दा मलाई धेरैले चिन्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लागेको हुँ । म यस पेशामा लागेर आफूसँगै बाबाममीलाई समेत चिनाउन चाहन्छु ।
सेक्स आवश्यक छ तर विवाहपछि मात्रै सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विवाहअघि सेक्स गर्नुहुँदैन त्यसैले मलाई सेक्सबारे खासै कुरा गर्न मन लाग्दैन आफूले माया गरेको मान्छेसँग विश्वासले सेक्स गर्दा पछुताएका धेरै केटी मैले भेटेकी छु । त्यसैले पनि विवाहअघि नो सेक्स
पैसा तिरेर सेक्स गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ ?
इज्जतभन्दा ठूलो पैसा हुन सक्दैन इज्जतसँग पैसाको तुलना नै गर्न मिल्दैन । यसबाहेक मलाई भन्नु केही छैन ।
नेपालगञ्जकी मोडल रुविना भन्छिन्, अब फेरि प्रेममा फसिँदैन
‘छोरी मान्छेहरुलाई चान्स मार्न कसले खोज्दैन र’: मोडल अञ्जली अधिकारी
खजुरा महोत्सवमा मेघा स्टार नायक ‘अनमोल केसी आउँदै’
ड्रिम ब्वाइको खोजीमा नायिका सुपुष्पा भट्ट
केटाको घाँटी र आँखा देख्दा सेक्स चाहना जाग्छ :माेडल एनि कुँवर